ग्यास्ट्राइटिसको उपचार यसरी गर्नुहोस् (अचुक उपायसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
ग्यास्ट्राइटिस त्यो अवस्था हो जसमा पेटमा हुने म्यूकोस सुन्निने गर्दछ । म्यूकोसमा हुने सेलले एसिड र एन्जाइमको उत्पादन गर्दछ जसले खाना पचाउनमा मद्दत गर्दछ । यसले खाना पचाउनका लागि खानालाई साना टुक्राहरुमा परिणत गर्दछ । यसले म्यूकसको उत्पादन गर्ने गर्दछ जसले एसिडको समस्याबाट बचाउँछ । ग्यास्ट्रनइटिस एसिड, एन्जाइम र म्यूकसलाई उत्पादन गर्नबाट बचाउँछ । आउनुहोस्, यसबाट बच्ने उपायका बारेमा जानकारी लिऔँ ।
१. खाद्य पदार्थबाट एलर्जीः
ग्यास्ट्राइटिसको समस्याले पेटमा ग्यास बन्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा पेट फुल्ने र दुख्ने गर्दछ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो यो बुझ्न आवश्यक छ कि यस्तो तपाईंलाई खानाको कारणले भइरहेको छ । अर्थात केही खानाका कारण तपाईंलाई यस्तो भइरहेको छ, त्यसकारण यसबाट बच्नको लागि आफ्नो स्वास्थ्यलाई फाइदा नपुर्याउने खानाको सेवन गर्न बन्द गर्नुपर्छ ।
२. ग्यास बनाउने खानाको सेवन नगर्नुहोस्ः
ग्यास्ट्राइटिसको समस्याको सबैभन्दा ठूलो कारण ग्यास बनाउने किसिमको खानाको सेवन गर्नु । केक, मटर, कार्बोनेटयुक्त सामग्री, अमिलो खानेकुरा, काउली, बन्दा, सुपारीलगायत खानाको सेवन नगर्नुहोस् । यदि तपाईं ग्यास बनाउने खानाको अत्यधिक सेवन गर्नुहुन्छ भने यस्तो खानेकुरा आजबाटै खान बन्द गर्नुहोस् ।
३. समयमा खानुहोस्ः
नियमित रुपमा खाना नखाँदा ग्यास्ट्राइटिसको समस्या हु्ने गर्दछ । धेरैजसो कामकाजी मानिसहरु बिहानको खाना छुटाउँछन् र एकैपटक दिउँसो धेरै खाने गर्दछन् जुन गलत बानी हो । यसले ग्यास्ट्राइटिस हुन मद्दत गर्दछ । यस्तो प्रकारको समस्याबाट बच्नका लागि नियमित रुपमा खाना खानुपर्छ । समयमा खाना र खाजाले ग्यासको समस्या कम हुने गर्दछ । यसका साथै खानालाई राम्रोसँग चपाएर खानुपर्छ ।
४. कम मसलायुक्त खाना:
धेरै तेल र मसाला भएको गरिष्ठ भोजन पनि ग्यास्ट्राइटिसको कारण बन्ने गर्दछ । यस्तो प्रकारको खाना सकेसम्म नखानुहोस् । खानामा हरियो सागसब्जी समावेश गर्नुहोस्, सधैँ भोक लागेको भन्दा अलि कम नै खानुहोस् ता कि खाना राम्रोसँग पच्न सकोस् । खाना खाएको आधा घण्टापछि मात्र पानी पिउने गर्नुहोस् ।
५. रक्सीबाट बच्नुहोस्ः
धेरै रक्सी पिउने बानीले पनि ग्यास्ट्राइटिसको समस्या पैदा गर्ने गर्दछ । यद्यपी रक्सी ग्यास्ट्राइटिसको लागि एक्लो कारण भने होइन तर रक्सी नपिउँदा अथवा यसको सेवन सिमित गर्दा भविष्यमा हुने ग्यास्ट्राइटिसको जोखिमबाट तपाईं पक्कै पनि बच्न सक्नुहुन्छ ।
६. थोरै र नियमित आहारः
ग्यास्ट्राइटिसको समस्या पेटसँग सम्बन्धित भएका कारण पेटलाई आराम दिनका लागि थोरै तर नियमित आहारको सल्लाह दिइने गरिन्छ । भारी खानाले तपाईंको ग्यास्ट्राइटिसको समस्यालाई थप गर्न मद्दत गर्दछ । यसका साथै ल्याक्टोज र ग्लूटोनजस्ता आहा र लिनबाट बच्नुहोस् ।
ग्यास्ट्राइटिसका कारण पेटमा बन्ने एसिडलाई कम गर्ने प्रभावकारी ढङ्गको उपचार पद्धती अपनाउनुहोस् । अन्यथा एसिडले सुन्निएको ठाउँलाई अझ बढि क्षती पुर्याउने गर्दछ । यसका साथै ग्यास्ट्राइटिस भएका मानिसहरुले एस्पिरिन र नन– स्टेराइडल एन्टी इन्फ्लेमेटरी ड्रगजस्ता औषधीबाट बच्नुहोस् ।
जेठ १६ गते, २०७२ - १८:१९ मा प्रकाशित